अर्डर इटाली प्राप्त गर्न, तपाईं एक सेन्जेन भिसा हुनुपर्छ। यसलाई सही सबै आवश्यक कागजात संकलन र उचित प्रकारका भर्नका लागि भने मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईंलाई थाहा रूपमा, इटाली जहाँ लाखौं मानिसहरू हरेक वर्ष प्राप्त गर्न प्रयास लोकप्रिय रिसोर्ट्स, को छ। धेरै, सबै ठाँउहरु हेर्न र संस्कृति थाह प्राप्त गर्न, यो अद्भुत देशमा भएको फिर्ता त्यहाँ फेरि फेरि भएको। सबैभन्दा लोकप्रिय मात्र हो जो Colosseum एक इटाली, को भव्य वास्तुकला छ। वेटिकन - साथै, राजधानी मा यो संसारमा सानो राज्य हो। मेरो आफ्नै आँखाले यो सबै हेर्न, यो एक इटालियन भिसा लागि आवश्यक कागजात तयार गर्न आवश्यक छ। यो यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
म इटाली यात्रा गर्न एक भिसा चाहिन्छ?
हामी रूस, बेलारुस र युक्रेन को नागरिकहरु कुरा भने, जवाफ पक्कै हो छ। तपाईं व्यक्ति मान्य सेन्जेन छ भने मात्र एक भिसा आवश्यक छैन। आवश्यक परमिट अन्य देशहरूमा वसोवास लागि छुट्टाछुट्टै मानिन्छ। यो परीक्षण गर्न, पहिलो एक विशेष वेबसाइटमा जानु पर्छ। यो लिंक इटालियन भिसा केन्द्र वा वाणिज्य दुतको कार्यालय सामान्य को वेब पृष्ठहरूमा पाउन सकिन्छ।
अर्को तपाईं देश, राष्ट्रियता, रहन लम्बाइ, साथै आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य सहित केही विवरण भर्न प्रस्ताव गरिनेछ। सबै क्षेत्रहरू भरिएका छन् भएपछि, निम्न विन्डो खुल्छ। त्यहाँ सेन्जेन को रसिद को स्थान सहित सबै आवश्यक कागजात सूची देखाइनेछ। प्रायजसो, नमूना इटालियन भिसा मा प्रश्नावली मा थप भर्ने लागू गरियो।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, प्राप्त गर्न कुनै विशेष आधिकारिक कागजात एक सेन्जेन भिसा बस असम्भव हुनेछ। यो हरेक वर्ष सङ्कलन र पेश गर्न आवश्यक कागजातहरू सूची परिवर्तन। 2017. लागि निम्नानुसार सूची छ:
पहिचान कागजात (मूल र सबै पृष्ठहरू प्रतिलिपि)।
एक पासपोर्ट, त्यहाँ केही आवश्यकताहरू छन्। यसको वैधता भ्रमणको अन्त्यमा को योजना मिति देखि भन्दा कम तीन महिना हुन हुँदैन। तपाईं पनि पहिलो पृष्ठ को प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्छ।
फोटो (2 पीसी।)। तिनीहरूले सेतो पृष्ठभूमि रंग हुनुपर्छ, गरे कुनै पहिले छ भन्दा महिना पूर्व कागजातको दाखिला गर्न आकार -3एक्स 4।
प्रोफाइल। यो गल्ती को धेरै अनुमति भर्दा किनभने, सबै भन्दा कठिन चरण शायद छ। हामी थप विवरण यस विषय मा हेर्न हुनेछ।
चिकित्सा नीति। कम्तिमा 30 000 यूरो - वैधता अवधिको युरोपेली देशमा रहन, सुमा आवरण सबै दिन विस्तार गर्नुपर्छ।
टिकट। त्यहाँ हामी पहिले नै टिकट किनेको र बुक गरेका छन् रूपमा, दोष, फिट पाउन धेरै छैन।
इटालियन वाणिज्य दुतको कार्यालय भिसा दस्तावेज पेश यो देश वा विशेष केन्द्र बनेको छ।
माथि अनिवार्य आधिकारिक कागजात सूची थियो। तथापि, व्यवहार मा, केही लाभ सुरक्षित गर्न, आफूलाई बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्न मानिसहरूको धेरै।
कागजातहरू जो कोहीले आफ्नै बनाउन सक्नुहुन्छ, एक इटालियन भिसा प्राप्त गर्न समावेश:
पुरानो पासपोर्ट, विशेष गरी पृष्ठको दूतावास रुचि ती को पहिले जारी सेन्जेन भिसा बारे जानकारी प्रदान गर्दछ। यस मामला मा, एक अनुमति प्राप्त संभावना निकै बढेको र त्यहाँ वार्षिक भिसा खोल्ने एक संभावना छ।
सम्भावित अवैध आप्रवासी - .. अपार्टमेन्ट, गाडी, कटेज, आदि यो को रूप मा सम्पत्ति स्वामित्व को प्रमाणपत्रलाई consular अधिकारी तपाईं थिएन सुनिश्चित छ। सहायता तपाईं जो त्यहाँ घर फर्कने एक इरादा छ भन्ने हो रूस मा एक सम्पत्ति, कि सुझाव।
हामी ध्यान गर्न आवश्यक छ
यो जानकारी युरोप वरिपरि यात्रा गर्न निर्णय गरेका छौं गर्नेहरूका लागि हो। आवश्यकता सेन्जेन लागि यात्रा अवधिको लागि मार्ग प्रदान गर्न भन्ने तथ्यलाई। त्यो छ, युरोप मा आफ्नो बाटो पुष्टि गर्नेछ जो टिकट को प्रतिहरू जब एउटा इटालियन भिसा लागि आवेदन सँगसँगै हुनुपर्छ। यदि केही दूरी रेल द्वारा हटाउन छ, समस्या त्यहाँ हुन सक्छ। बुक र केवल 45 दिन प्रस्थान मिति अघि टिकट किन्न।
त्यसपछि इटालियन भिसा केन्द्र संकेत गर्दा एक निःशुल्क फारम मा एक आवेदन लेख्न गर्नुपर्छ। यसलाई मा प्रतिनिधित्व टिकट को impossibility कारण संकेत गर्नुपर्छ, र यातायात, कस्तो, र जो तरिका आन्दोलन हुनेछ सूचित गर्न। निस्सन्देह, अर्को देशमा प्रवेश गर्न अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो छ, तर तपाईं सही यसलाई के भने, तपाईँले संसारमा सबैभन्दा सुन्दर देशहरू भ्रमण गर्न अवसर पाउनेछन्।
एक इटालियन भिसा मा के कागजात आवश्यक छ?
यो हामी सबै आवश्यक सरकारी कागजात, साथै सम्भव थप जानकारी, आफ्नै संकेत छ जो विचार छ कि जस्तो थियो। तर, इटालियन वाणिज्य दुतको कार्यालय को निर्णय मा सकारात्मक प्रभाव पार्न भनेर केही मद्दत छ।
त्यसैले, यो प्रदान गर्न आवश्यक:
यस यात्राको समयमा निवास को स्थान बारे जानकारी। यो होटल, अपार्टमेन्ट, द पर्यटक भाडामा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाण प्रदान गर्न हुनेछ विला र यति मा। डी बुझाउँछ। तपाईं खरिद एक पर्यटक भौचर मा इटाली यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी डाटा दूतावास आवश्यक छैन।
निमन्त्रणा पत्र। यदि तपाईं नातेदार वा साथीहरूसँग रहिरहेका छन् यो आवश्यक छ। जसले तपाईं उसलाई आउन निमन्त्रणा व्यक्ति को व्यक्तिगत डाटा निर्दिष्ट गर्दछ। साथै, पत्र सम्बन्ध डिग्री समावेश गर्नुपर्छ, नातेदार वा मित्र आवास सँग सम्बन्धित सबै लागत को हेरविचार लिन्छ भन्ने तथ्यलाई को उल्लेख गरे।
एक इटालियन भिसा (काम को स्थान मा) को लागि मद्दत गर्नुहोस्। यो धेरै ध्यान दिएर लिएको हुनुपर्छ, यसको लागि मानवअधिकार कर्मचारीहरु टाउको को छाप र हस्ताक्षर संग कम्पनी लेटरहेड प्रयोग सोध्न आवश्यक छ। को आवेदक कार्यालय बचत देखि नियमित छुट्टी छ कि प्रमाणपत्र स्थिति, सेवा को कुल लम्बाइ, औसत तलब, साथै जानकारी उल्लेख गर्नु पर्छ।
एक इटालियन भिसा कसरी प्राप्त गर्ने? यो अन्त गर्न, वाणिज्य दुतको कार्यालय कागजातहरू सबै प्रकारका परिचय र प्रतिक्रिया को लागि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। सरकारी कागजात पूरा विशेष स्थान प्रश्नावली बाहिर खडा। भरने त्रुटिहरू वा सुधारहरू थिए भने, भिसा अस्वीकृत गर्न सक्छ।
फारम प्राप्त गर्न, कृपया इटालियन दूतावास सम्पर्क गर्नुहोस्। तिनीहरूले खाली पानाहरू बाहिर दिन र छोटकरीमा तपाईं भर्न चाहिने व्याख्या। साथै, यी प्रकारका इटालियन भिषा आवेदन केन्द्र वेब पेज मा पाउन सकिन्छ। त्यहाँ तपाईं इटालियन भिसा मा प्रश्नावली भर्नु एक नमूना देख्न सक्छौं। तर त्यसपछि पनि, धेरै गल्ती र परिणाम रूपमा विदेश जान सक्नुहुन्छ।
भर्नका लागि सिफारिसहरू। व्यक्तिगत जानकारी
तपाईं स्वयं प्रश्नावली भर्न निर्णय भने, तपाईं मुद्रित हस्तलेखन लेख्न आवश्यक छ। तपाईं विद्युतीय संस्करणमा आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले राजधानी अक्षरहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
अब तीन ब्लक मा सम्पूर्ण प्रक्रिया विभाजन, कागजात भर्ने विचार गर्नुहोस्। हामी सुरु गर्न व्यक्तिगत जानकारी बुझ्न पर्छ:
पहिलो र थर एक पासपोर्ट संग बन्द लिखित गर्न छ;
तपाईं नाम परिवर्तन भने, यो संकेत गर्नुपर्छ;
जन्म मिति एक मानक ढाँचामा रेकर्ड गरिएको छ;
जन्म स्थान प्रमाणपत्र निर्दिष्ट हुनुपर्छ;
राष्ट्रियता र जन्म देश तपाईं सोभियत संघ प्रविष्ट गर्नुपर्छ 1991 अघि, अनुसार जन्म वर्ष संग संकेत छ;
वैवाहिक स्थिति बच्चाहरु लागि प्रश्नावली मा निर्दिष्ट गरिएको छैन;
क्लिक गर्नुहोस् "पहिचान नम्बर" हटाइएका गर्न सकिन्छ।
पासपोर्ट र सम्पर्क विवरण
तपाईंले आवेदन मा निर्दिष्ट गर्न आफ्नो पासपोर्ट विवरण फारम आवश्यक एक इटालियन भिसा राख्न। निम्नानुसार यो गर्नुपर्छ:
सुरू गर्न नम्बर र पासपोर्ट को प्रकार बारे जानकारी भर्न छ।
यसलाई निवास वास्तविक ठेगाना निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। उहाँले अक्सर स्थायी निवास को ठेगाना संग एकै समयमा पर्नु छैन। यस मामला मा, इटालियन भिसा भाडादारी सम्झौता लागि कागजात सूचीमा थप गर्नुपर्छ।
अर्को - यो पेशामा नाम। यो सम्पूर्ण प्रोफाइल रूपमा साथै लेख्न आवश्यक छ। तपाईं अंग्रेजी वा इटालियन चयन भने, तपाईं स्थानान्तरण गर्न आवश्यक हुनेछ। ट्रान्सलिटेरेशन प्रयोग गर्दा केहि परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन।
तपाईं एक उद्यमी हो भने, तपाईंले आफ्नो घर ठेगाना प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
को यात्रा जानकारी बाँकी
अर्को, भरण विशिष्ट यात्रा बारे मात्र जानकारी रहिरहन्छ। निम्नानुसार यस गरेको छ:
भ्रमणको उद्देश्य (यो थप पछि) अतिरिक्त कागजात पुष्टि हुनुपर्छ;
तपाईं पहिलो प्रविष्टि को देश निर्दिष्ट गर्न आवश्यक - तपाईं पहिलो यात्रा पार गर्दै एक अर्थात्;
यदि सेन्जेन भिसा पहिले प्राप्त गरेका थिए, यो बारेमा सूचित गर्न निश्चित हुन;
निमन्त्रणा मा यात्रा गर्दा तपाईं जसले तपाईंलाई भनिन्छ व्यक्ति बारे जानकारी भर्न आवश्यक;
यो यात्रा लागि लागत वहन गर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ,;
धेरै अंक युरोप मात्र नागरिक भर्न सही छ;
अन्त मा, सधैं, यो मिति र प्रश्नावली भर्नु ठाउँमा, साथै व्यक्तिगत हस्ताक्षर उल्लेख गर्नुपर्छ।
को यात्रा को उद्देश्य कसरी पुष्टि गर्न?
सजिलो छैन - यो संग्रह र इटालियन भिसा दस्तावेज पेश बुझे गर्नुपर्छ। त्यसैले, देश मा रहन उद्देश्य पुष्टि बिना तपाईं जाने दिनेछ।
समस्या जोगिन, तपाईं जस्ता कागजात तयार गर्न आवश्यक:
निमन्त्रणा व्यक्ति कानुनी रूपमा इटाली निवास गर्ने। यो कागज युरोपेली देशहरूको नागरिकहरु जो व्यक्ति दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, घटनाहरू लागि व्यक्ति र कानुनी निकायहरूको आमन्त्रण सक्छ।
होटल आरक्षण वा होटल, तपाईं एक यात्रा कम्पनी को लागि एक भौचर पेस गर्न सक्नुहुन्छ।
कागज, इटाली मा एक शैक्षिक संस्थाले मा भर्ना पुष्टि।
इटालियन दृढ मा रोजगार मा कागजातहरू।
यी सबै कागजात अलग्गै, तपाईं आफ्नो वित्तीय सुरक्षा बारे जानकारी प्रदान गर्नु पर्छ। अर्डर इटाली प्राप्त गर्न, तपाईंले प्रति दिन कम्तिमा 70 यूरो कमाउन भनेर बताउँदै प्रमाणपत्र आवश्यक छ। को consular स्टाफ विदेशीले एक समय को लागि आफ्नै देशमा बाँच्न र आफ्नो मातृभूमि फर्कन सक्नुहुन्छ पक्का हुनेछ मात्र पछि तिनीहरू सकारात्मक निर्णय हुनेछ।
रूपमा पहिले इटालियन भिसा विशेष फोटो लागि आवश्यक कागजात सहित यो लेख, मा उल्लेख गरे। नयाँ आवश्यकताहरू मा 2015 शुरू गरेका थिए। त्यसपछि यो दिन देखि मान्छे सेन्जेन राज्य जान चाहने fingerprinted र फोटो खिंचवाने हुनुपर्छ। यो अन्यथा यो तुरुन्तै अस्वीकार गरिनेछ, के अब एक व्यक्ति सबै सरकारी कागजातहरू व्यक्तिगत पेश गर्नुपर्छ छ गरायो।
फोटो नै को लागि आवश्यकताहरु परिवर्तन छैन। यो सेतो वा हल्का पृष्ठभूमि, आकार3एक्स4सेमी मा गरिनु पर्छ। यो आवेदक को अनुहार को तस्वीर को कुल क्षेत्र को 75-80% कब्जा गर्नुपर्छ। त्यहाँ आफ्नो अनुहार कवर कुनै घाम, टोपी र बाल हुनेछ। फोटो अग्रिम गर्न सकिन्छ, तर आवेदन मिति अघि कुनै6भन्दा बढी महिना।
नाबालिग के कागजात आवश्यक हो?
आमाबाबु, विदेश जा भनेर तिनीहरूलाई आफ्नो सानो बच्चाहरु लिएर साधारण। यस यात्राको लागि तयार हतार गर्नु हुँदैन, तपाईंले पहिलो बच्चाको लागि छुट्टै भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक छ। इटालियन भिसा पूरक बच्चाको जन्म प्रमाणपत्र वा राहदानी लागि कागजात को मानक सूची (उपलब्ध भएमा)।
एक सानो आफ्नै पासपोर्ट हुन सक्छ वा कागजात आमाबाबुले मा प्रवेश गर्न।6वर्ष भन्दा कम एक बच्चा, यो भिसा शुल्क भुक्तानी गर्न हुनेछ छैन। यदि आमाबाबुको निर्देशन पर्याप्त कारण थियो। त्यहाँ यस्तो खेल घटना रूपमा परिस्थिति जहाँ एक बच्चा तेस्रो पक्ष संग विदेश जा रहेको छ, हो। त्यसपछि उहाँले बच्चा हटाउने, notarized लागि व्यक्तिगत पासपोर्ट, साथै अभिभावकको सहमति आवश्यक छ।
दाखिला कागजातहरू लागि प्रक्रिया
सबै आवश्यक कागजात संकलन गरिएको गरेपछि, यसलाई (मास्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग मा स्थित) दूतावास वा इटालियन भिसा केन्द्र (देश को धेरै प्रमुख शहर मा स्थित) सम्पर्क गर्न आवश्यक छ। सरकारी कागजात प्रवर्तन अधिकारी जहाँ तपाईं लागू गरेका छन् सेवा गर्दा केही प्रस्ट्याउने प्रश्न हुन सक्छ। 5-7 काम दिन - आवेदन को विचार को अवधि।
मास्को देखि भ्लाडिभास्तोक गर्न: आजकल तपाईं देश को धेरै शहर मा एक coveted अनुमति प्राप्त गर्न सक्छन्। के तपाईं ठीक सबै कागजात सङ्कलन गर्न सक्ने शङ्का यदि कुनै यात्रा एजेन्सी मा पहुँच गर्न सकिन्छ। एक शुल्क को लागि, विशेषज्ञहरु एक भिसा प्राप्त मदत गर्नेछ। पैसा को बर्बादी - तर, यदि तपाईं सबै सान्दर्भिक कागजात सूची थाहा छ, एजेन्सी सम्पर्क गर्नुहोस्। भिसा केन्द्र वा व्यक्तिलाई सेवा आधिकारिक कागजात र राम्ररी पूरा प्रकारका मा वाणिज्य दुतको कार्यालय सङ्केत गर्दै, तपाईं सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त संभावना छ।
झण्डा के हो र यो कहाँ प्रयोग गरिन्छ?
वर्दी लागि धर्काहरू। रूसी सेना को आकार। सैन्य धब्बा
निर्वाचन प्रणाली को प्रकार: लाभ र बेफाइदा
खैरो-Sequard सिंड्रोम। पाठ्यक्रम को सम्भव भिन्न
कसरी आफ्नो बिहान संगठित मान्छे राम्रो सुरु गर्न?
बिरालोको बच्चाहरुको मा पखाला: गराउनुहुन्छ र उपचार
मासु सस - कुनै पनि garnish गर्न स्वादिष्ट साथै
Antispasmodic "Mebsin Retard": निर्देशन। "Mebsin Retard": सङ्केत गर्छ, contraindications, समीक्षा
त्यहाँ राम्रो केही उपयोगी चुम्बन भन्दा छ